तपाईंको अर्को गर्मी बिदाको लागि very धेरै उपयोगी अनुप्रयोगहरू यात्रा समाचार
नयाँ प्रविधिहरूले हाम्रो यात्राको मार्ग परिवर्तन गरेका छन् र अधिक सहज र सरल बन्छन्। हाम्रो स्मार्टफोन हाम्रो यात्रा को एक अत्यावश्यक सहयोगी हो र हाम्रो यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव बनाउन योगदान गर्न कि पर्यटन को समर्पित ती सबै अनुप्रयोगहरूको अधिकतम बनाउन मद्दत गर्दछ।
पर्यटनका लागि समर्पित अनुप्रयोगहरूको समूहमध्ये, यसपछिको लेखमा हामी highlight हाइलाइट गर्नेछौं जसले तपाईंको छुट्टीको समयमा विभिन्न अवसरहरूमा मद्दत गर्दछ। यस तरीकाले तपाईं यात्राको तयारी अझ राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ र उठ्न सक्ने साना अप्रत्याशित घटनाहरूको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सुरु गर्यौं!
1 XE मुद्रा
एक भगदानी आयोजन गर्दा, कति पटक तपाईंले हेरेका छ कि विनिमय दर तपाईं गइरहेको देशको मुद्रालाई कसरी हो? निश्चय पनि यात्राको धेरै दिन अघि भएको थियो, कहिले निर्णय गर्ने कोशिस गर्दै उत्तम परिवर्तन हुने।
एक्सई मुद्रा मुद्रा बजारसँग राख्नको लागि उत्तम अनुप्रयोग हो: उनीहरूको प्रत्येकलाई तपाईंको मुद्रासँग कति तुलना गरिन्छ र हालको दिनमा उनीहरूको विकास के हो।
यस अनुप्रयोगले तत्काल रेकर्ड गरिएको विनिमय दरहरू र तालिकाहरू प्रदान गर्दछ र नवीनतम अद्यावधिक विनिमय दरहरू पनि भण्डार गर्दछ ताकि यो इन्टरनेट उपलब्ध नभएको बेला पनि काम गर्दछ।
यो अनुप्रयोगले हामीलाई एक पूर्ण र विस्तृत टुरिस्ट गाइड डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ जहाँ हामी शहरको बारे जान्नका लागि जानकारी प्राप्त गर्ने छौं उपयोगी यात्री समीक्षा, मूल्य र तालिकाको साथ आकर्षणहरू, संग्रहालयहरू, रेस्टुरेन्टहरू, थिएटरहरू र पसलहरूमा सम्बन्धित।
एमट्रिपसँग travel 35 भन्दा बढी ट्राभल गाईडहरू छन् तर नि: शुल्क पूर्वावलोकनको डाउनलोड मात्र अनुमति दिन्छ, त्यसैले पूर्ण टुरिस्ट गाईड प्राप्त गर्न तपाईंले 3,99..XNUMX यूरो तिर्नु पर्छ। यद्यपि सामग्रीको गुणस्तरका लागि यो लायक छ।
यस अनुप्रयोगमा, विकल्प एल जेनिओ डी भायाजे बाहिर छ, जसले स्वचालित रूपमा तपाईको यात्रा रुचि, रुचाइएको गति, यात्रा मिति, आवास, ठाउँ र प्रतिष्ठानहरू खोल्ने समय, साथै अन्य यात्राहरूको मूल्या according्कन अनुसार व्यक्तिगत यात्रा कार्यक्रम सिर्जना गर्दछ। भिजिट अर्डरिंग प्रयोग गर्नुहोस् कुनै पनि समयमा भ्रमणहरू पुनर्गठन गर्न र निजीकृत गर्नुहोस्।
एमट्रिप १००% अफलाईन छ त्यसैले साझेदारी र अद्यावधिक बाहेक कुनै इन्टरनेट जडान आवश्यक पर्दैन। योसँग ट्राभल डायरी पनि सजिलैसँग सिर्जना गर्न र होटलहरू, फोटोहरू र टिप्पणीहरूमा तपाईंको रेकर्ड साझा गर्न।
छवि | स्मार्टब्लग
एन्ड्रोइड र आईओएस मा उपलब्ध, Foodspotting एक धेरै चाखलाग्दो अनुप्रयोग हो जुन सामान्य अनुप्रयोगहरू वा वेबसाइटहरू भन्दा फरक छन् जसले रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा राय स collect्कलन गर्दछ, हामीलाई हाम्रो यात्राको क्रममा आफुमा भेट्टाउने वरपर वा क्षेत्रका स्वादपूर्ण र उत्तम मूल्यवान व्यंजनहरू कुन हुन् भनेर जान्न अनुमति दिन्छ। यसैले, जब हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा अर्डर गर्न जान्छौं तब हामी जान्न सक्दछौं कि कुनै व्यञ्जन वास्तवमै यसका प्रख्यात छ कि छैन।
फूडस्पोटि youमा तपाईले सबैभन्दा धेरै मन पराउने व्यंजनहरूको सिफारिश गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई तस्बिर खिच्न सक्नुहुन्छ कि अन्य प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको अनुभव जान्न सक्दछन्। यस अनुप्रयोगका लागि संसारमा four० लाख भन्दा बढी भाँडा सिफारिस गरिएको छ र सबै भन्दा धेरै खाद्य यात्रीहरू यसबाट खुसी छन्।
जो उडानको डरबाट ग्रस्त छन् वा यात्राको तयारीले धेरै तनाव उत्पन्न गर्दछ ओएमजी मैले पाउन सक्दछु! तपाईको सब भन्दा राम्रो सहयोगी
यस अनुप्रयोग ध्यान गर्न सिक्न को लागी सब भन्दा सजिलो तरीका हो। यसको माइन्डफिलनेस प्रोग्राम र यसको ध्यान प्रविधिको धन्यवाद, हामी उडान वा यात्राको लागि तयारीको डरले उत्पन्न तनाव र चिन्ताबाट छुटकारा पाउन सक्छौं। यस तरीकाले हामी हाम्रो जीवनमा अझ बढी खुशी ल्याउन र दाहिने खुट्टामा छुट्टिहरू सुरू गर्न सक्षम हुनेछौं।
थपको रूपमा, यस अनुप्रयोगले निद्रा गडबडीहरूसँग लड्न र एक दिनको १० मिनेटमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ। यो तपाईंको स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र नि: शुल्क हो। यो दुबै गुगल प्ले र आईट्यून्समा उपलब्ध छ।
एक यात्रीले दिन सक्ने सबैभन्दा खराब सपनाहरू यो हो कि उसको उडान रद्द गरिएको छ, ढिलाइ भइरहेको छ, जडान हराएको छ वा ओभरबुक गरिएको छ जब ऊ आफ्नो बिदा सुरु गर्न लागिरहेको छ। निस्सन्देह, यो एक कार्य हो जुन तपाईंले जुनसुकै यात्रामा जाने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो सबै खुशी र शान्तलाई हटाउन धम्की दिन्छ।
आईओएस र एन्ड्रोइडमा एक नि: शुल्क अनुप्रयोग जुन तपाईलाई समस्याबाट बचाउन सक्छ फ्लाईपाल हो। यसको ठूलो सद्गुण यो हो कि यसले यात्रुलाई प्रस्तुत गर्दछ र वास्तविक समयमा विकल्पहरू जुन उनीहरूले एयरलाइन्सबाट माग गर्न सक्दछन् यदि त्यहाँ युरोपेली नियमहरू अनुसार उनीहरूको उडानमा समस्या छ। त्यो हो, यसले तपाईंलाई ध्यान दिन सूचित गर्दछ कि एयरलाइन्सहरूले तपाईंलाई सीट, वित्तीय क्षतिपूर्ति वा प्रतिपूर्ति सहित वैकल्पिक उडानहरूको बारेमा प्रस्ताव गर्नै पर्छ।
यसबाहेक, यदि एयरलाइन्सले यात्रुलाई उपयुक्त मद्दत प्रदान गर्दैन भने, एप्लिकेसनबाट नै युरोपेली अधिकारीहरूलाई सूचित गर्न सकिन्छ कि उनीहरू आफ्नो कम्पनीको दायित्व पूरा गर्न असफल भएमा यी कम्पनीहरूलाई जरिवाना तिर्नमा जिम्मेवार छन्।
के तपाईंले यस यात्रा मध्ये कुनै पनि आफ्नो यात्रामा प्रयोग गरिसक्नुभयो? यदि होईन भने, कुन चाहिँ प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्? अरू कुन अनुप्रयोगहरू तपाईं सिफारिस गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » तपाईंको अर्को गर्मी बिदाको लागि very धेरै उपयोगी अनुप्रयोगहरू